जेठ ३१, २०७५ बिगुल न्यूज - DG
काठमाडौँ, जेठ ३१ : विश्वकप फुटबलको शनिबार भएको उद्घाटन खेलमा नेपाली समय अनुसार साँझ ८ः४५ बजे साउदी अरब र आयोजक राष्ट्र रूसबीच खेल शुरु भएको छ ।
उद्घाटन समारोहमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले संक्षिप्त सम्बोधन गरी खेलमा आउने पाहुनासँगै खेलाडीहरूलाई स्वागत गर्नुभएको छ ।
फुटबलको महाकुम्भ मानिने यस खेलको उद्घाटन समारोहमा इङ्गल्याण्डका पपस्टार राबी विलियम्स र स्पेनका प्लासिडो डोमिगोले आकर्षक प्रस्तुतीका साथ उद्घाटन समारोहलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्नुभएको थियो । कलाकारहरू जुआउन डिएगो फ्लोरेज र गरीफुल्ल्निाले पनि उद्घाटनमा आफ्नो प्रस्तुती राख्नुभएको छ ।
सन् २०१८ को विश्वकपमा पहिलो गोल गर्न रूसी खेलाडी इयुरी गाजिन्स्की सफल
साउदी अरबले चलाएको बलसँगै खेलको उद्घाटन भएको हो । भने खेलमा रूसले पहिलो गोल गरी आफूलाई प्रभावशाली समूहको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । पहिलो गोल गर्न ३२ वर्षीय रूसी खेलाडी इयुरी गाजिन्स्की सफल हुनुभएको छ । उहाँले पहिलो हाफको १५ मिनेटमा गोल गर्न सफल हुनुभएको छ ।
यसरी भव्यताको साथ गरियो उद्घाटन
प्रकाशित : बिहिबार, जेठ ३१, २०७५२१:२२
पहिलो हाफमै आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुँदै रुस
रियल कीर्तिमानी मूल्यमा नेयमार भित्र्याउन तयार ! यस्तो हुन सक्छ किर्तिमानी रकम !
भारतीय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान तथा प्रशिक्षक वाडेकरको निधन !
घरेलु मैदानमा बार्सिलोना हारबाट जोगियो !